बाबुराम भट्टराईको प्रश्न – अरिंगाल सेना विपक्षीहरूको हुर्मत लिन तल्लीन छ ! देश कता जाँदैछ? भिडियो सहित – Complete Nepali News Portal
बाबुराम भट्टराईको प्रश्न – अरिंगाल सेना विपक्षीहरूको हुर्मत लिन तल्लीन छ ! देश कता जाँदैछ? भिडियो सहित
काठमाडौं, ९ जेठ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कोरोनाको ख,तरा दिन दुईगुना रात चौगुनाले देखिरहेको औंल्याएका छन् । आज राति ट्विटरमार्फत डा. भट्टराईले यस्तो ख,तरा औंल्याएका हुन् ।
उनले भने-“कोरोना दिन दुइगुना रात चौगुनाले बढ्ने ख,तरा देखिदैछ ! विदेशमा लाखौं श्रमिक अ,लपत्र छन् ! सीमामा विना परीक्षण छोडिदैछ।म,र्नेको सदगतको व्यवस्था छैन।सर्वत्र परीक्षण कीटको अभाव छ । मन्त्री नेताका घरघरमा नयाँ नक्सा बाँड्न व्यस्त छन्।अरिंगाल सेना विपक्षीहरूको हुर्मत लिन तल्लीन छ ! देश कता जाँदैछ?”